What is celebrity branding in kushambadzira? - [International Consulting]
> What is celebrity branding in kushambadzira?
What is celebrity branding in kushambadzira? : Kushandura kushandiswa kwevanhu vane mukurumbira kudengesa
Mhedziso yekukurudzira kukudzwa
Kubwinya kugutsikana kunobatsira
Kukosha kwekukurudzira kunakidzwa
Chii chinokurudzira kukurudzira kuita
Izvo zvinobudirira kushandisa masangano mukudhinda
VIP kuisa chiratidzo ndeye nzira yekuzivisa izvo zvinoshandiswa nehutungamiri hwenyenyeredzi kuti inotungamira chinhu kana hutungamiri nekubatsirwa kwekugamuchirwa kwavo uye chinzvimbo kuvanhu vose. Iyi nzira ine nzira shomanana; iyo inogona kusanganisira zita guru richiratidzira mune bhizinesi uye iyo nyota inogona kuve yakanyorwa nokuda kuenda kune dzimwe nguva yekufambira mberi.
Imwe nzira ndeyokutanga chibereko chekushandisa zvinoshandisa zita ravo sechinhu. VaRoma uye zvikamu zvezvokupfeka ndizvo zvakakura zvipo zvinopiwa kusanganisira kufambira mberi kwakadaro. Vose vanonyanya kufarira, vaongorori uye vamiririri vanozivikanwa kuti vanopa zita ravo kune rimwe marimi kana zvinhu zvakagamuchirwa. Jennifer Lopez akatanga mutsara wake wenguo imwe nguva shure iyo inoratidzira mapurani yenguo yakanyatsogadzirwa naye.
Kushambadzira Kwemagariro Kwakasiyana Sei Kubvumirana Kwemhando
What is celebrity branding in kushambadzira? : Mhedziso yekukurudzira kukudzwa
Muchengetedzi wekutenga maitiro unowanikwa zvikuru nevanhu vanozivikanwa. Nyanzvi dzinoratidzira, kushandisa masangano ekudzidzira, inotsvaga nzira yehupenyu yezvinyorwa zvepamusoro-soro kuti igovapa chikwereti icho chinoita kuti vatsve. Basa ravo rekufunga, kupa, kufunga, kusiyana uye mufananidzo wakazaruka zvinotaridzirwa mukati mese kuti vadzigadzire basa rakanaka rehupiro kana chinhu.
Kudzokorora, kuvhara, CS kuparidzira, kuparadza, kubata, kufanana, uye kuwirirana kwekuisa sarudzo ndeye mitemo inobva pakuongorora kunowanikwa saiye akapemberera Miss World Aishwarya Rai weIndia ane maziso anoshamisa akarwa hondo yeziso. Chikamu chemashoko makuru anozivikanwa nekuda kwezwi ravo risingafungidziki. Iyi pfungwa yakaita kuti inzwi-pamusoro purogiramu mukusimudzira. Inzwi ravo rinongotora muvatengi kana rinoshandiswa mune bhizinesi.
Kukurukurirana Kunoshamisa | Chii chinonzi Celebrity Marketing?
What is celebrity branding in kushambadzira? : Kubwinya kugutsikana kunobatsira
Nhasi, inenge 20% yebhizimisi rinozivisa inoshandisa zita guru rutsigiro. Zita guru risina mubvunzo rinogamuchira zvinhu zvakawanda uye mabhii pamusoro penguva. Nguva imwe neimwe imwe mufananidzo weVIP uri kutarisirwa kune vanhu vakawanda. Sangano rinofanira kuyeuka munhu wekare uye kutamba sezvinodiwa.
Kufungidzira mumwe munhu mumwe nomumwe nguva inotsigira kushingaira kwevatengi, asi vanyori vaviri havafaniri kukakavadzana. Mukuru weEngland David crekham akambundira zvinhu zvakawanda. Achiri kukurudzira Gillette, chishuwo chake chetsitsi chaifungidzirwa uye akapiwa kutaridzika pachena. Apo kurwisana kwePurisa simba rake rekugadzirwa kwairatidzwa zvose zvakapedzwa uye zvakanyanyisa David Beckham akaratidzwa.
Unonyanya Branding Agency | Personal Branding Experts, Personal
What is celebrity branding in kushambadzira? : Kukosha kwekukurudzira kunakidzwa
Pamusoro pekuda kwekuti zita guru harina kufara nekufungidzirwa zvakajeka nguva imwechete iyo munhu anogona kuita mufananidzo chaiwo kana kuti mazita avo pachavo anogona kushandiswa nguva dzose pavanokurudzira pane chimwe chinhu. Icho chigoni chinogona kuratidza hunozivikanwa hwemhando yepamusoro-soro, yakafanana neshoko rekunyora rinogona kuva rakanaka kana zita guru rakagadzirirwa kugadzirisa saJennifer Lopez uyo akaita chirongwa cheJLO, icho chinoshandiswa kuparidzira marimu uye zvisinei nemuchina wezvokudya zvake.
Imwe nzira yakakosheswa nenzira iyi ndeyokuti mararamiro angangodaro achitaura kumapoka kunyange mushure mokunge VIP yakarashika maonero ake sezvo ichange isingadi kubvuma kuona uye inobatsira mukuronga kwenguva refu. Ikopa yeVIP pachayo inotaridza nzira uye maitiro.
Chii chinonzi Kukudzwa kugutsikana? tsanangudzo uye zvinoreva
What is celebrity branding in kushambadzira? : Chii chinokurudzira kukurudzira kuita
Nhamba huru yemadhora iri kugoverwa nevashambadziri kuti vawane nguva shoma yekutsigirwa ye whizzes gore negore. Davie Brown Entertainment ine sangano yakanyatsozvipira kumushumo wekusarudza zita guru chechinhu. Havasi kungotonga mutongi weVIP kuti awedzere mararamiro evanhu uye kutora kwevatengi asi zvakare kuwedzera urongwa hwezvokutengeserana zvemasidhodhi kuti atsigire mazviri.
Zvinotsigirwa uye Zvinoshandiswa neZvibvumirwe Zvemunharaunda - Basa reBaer
What is celebrity branding in kushambadzira? : Izvo zvinobudirira kushandisa masangano mukudhinda
marketing, kushambadzira, kushambadzira,
Zita* Email* Website Comment*